DF iyo maamulka KOONFUR GALBEED oo isku haysta deegaanka Ceelasha Biyaha – Benaadir News Network
DF iyo maamulka KOONFUR GALBEED oo isku haysta deegaanka Ceelasha Biyaha
Baydhaba (Benaadir News) – Wasiirka waxbarashada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Yuusuf Xasan oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Baydhaba ee gobolka Bay ayaa eedeyn la xariirta imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare waxa uu u jeediyey mas’uuliyiinta wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka.
“Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mas’uuliyad buuxda ayaa ka saaran waxbaridda dhammaan ardayda deegaanka Ceelasha Biyaha, degmada Afgooye iyo guud ahaan deegaanada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya,” ayuu yiri wasiir Maxamed Yuusuf.
“Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed waxay ka soo horjeedaa in lagu tunto xuquuqda ardayda deegaanka Ceelasha Biyaha. cawaaqibka iyo dhibaatada ka dhalatana waxaa qaadaya wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka, maadaama la jahwareeriyay ardayda, waalidiinta iyo bulshada deegaanka intaba,” ayuu yiri wasiirka waxbarashada maamulka K/Galbeed.
Previous Garabka Cabdi Xaashi oo ka horyimid heshiiska doorashada
Next Khasaare ka dhashay weerar ay Al-Shabaab ka fuliyeen duleedka Dhuusamareeb